အီးတုံးပုံစံ ၁၂ မြိုးက ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး
HomeKnowledgeအီးတုံးပုံစံ ၁၂ မြိုးက ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး
21 ရာစုမှာတော့ ကနျြးမာရေးကို စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးတာ အရေးပါမှနျး နောကျဆုံးတော့ သိသှားပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျက လက်ခဏာတှကေိုတော့ ဂရုစိုကျစောငျ့ကွညျ့ဖို့ မကွာခဏ မနေ့တေတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အီအီးတှကေို စိစဈကွညျ့ဖူးပါသလား။ သငျ့အီအီးတှရေဲ့ အရောငျနဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျတှကေ သငျ့ကနျြးမာရေးကို ပွောပွပါလိမျ့မယျ။
ပုံမှနျအရောငျကတော့ အညိုရောငျပါပဲ။ သငျစားအပျေါမူတညျပွီး အနညျးငယျတော့ အရောငျပွောငျးပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ထငျရှားတဲ့အကွောငျးရငျးမရှိဘဲ ရုတျတရကျ အရောငျပွောငျးသှားတာက သတိပေးတဲ့ လက်ခဏာဖွဈနိုငျပါတယျ။
အဖွူရောငျ၊ မီးခိုးရောငျ၊ ရှံ့ရောငျဖွဈနရေငျ သညျးခွရေညျခြို့တဲ့တာကို ပွတာပါ။ သညျးခွရေညျထုတျပေးတဲ့ အသညျးနဲ့ သညျးခွအေိတျမှာ ပွဿနာရှိနိုငျပါတယျ။ သညျးခွပွှေနျက ပိတျနခွေငျးကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အသညျးရောဂါဖွဈတဲ့အခါ တှရေ့တဲ့ သညျးခွကြေောကျကွောငျ့လညျး အဖွူရောငျကို တှရေ့ပါတယျ။ အဖွူရောငျအခြှဲတှေ ကပျနခွေငျးက အူမကွီးရောငျရမျးမှုကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကလိုရိုဖီးလျကွှယျဝတဲ့ အစိမျးရောငျအသီးအနှံတှေ၊ အစိမျးရောငျပါတဲ့ သောကျစရာတှနေဲ့ သံဓာတျအားဖွညျ့ပေးတဲ့ အစားအစာတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အစိမျးရောငျ အစားအစာတှကွေောငျ့ မဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ အစာခွဖေကျြတာမွနျပွီး သညျးခွရေညျနဲ့ Bilirubin ဆဲလျတို့အတှကျ အခြိနျလုံလောကျစှာမရလို့ ဖွဈပါတယျ။
အဝါရောငျကတော့ သညျးခွပွှေနျပိတျနခွေငျးနဲ့ အဆီဓာတျစုပျယူမှု နညျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ပနျကရိယက ထုတျပေးတဲ့ အငျဇိုငျးခြို့တဲ့တဲ့အခါလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အရမျးလညျး လနျ့မသှားပါနဲ့ဦး။ မုနျလာဥဝါတှေ အစားမြားလို့ ဒါမှမဟုတျ အဝါရောငျပါတဲ့ အရညျတှေ သောကျတာမြားလို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Aspririn, ibuorofen နဲ့ သံဓာတျပါတဲ့ ဆေးတဲ့သောကျတာမြားရငျ ဒါမှမဟုတျ အူသိမျမှာ သှေးထှကျနရေငျ အနကျရောငျကို တှရေ့ပါတယျ။ထပျပွီး တှနေ့ရေသေးရငျတော့ ဆရာဝနျဆီ ခကျြခငျြးသှားလိုကျပါတော့။ ဘလူးဘယျရီသီး၊ နှယျခြိုလိုမြိုး အနကျရောငျပါတဲ့ အစားအစာတှေ စားရငျလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
အနီရောငျကတော့ သငျစားတဲ့ အစားအစာနဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ မုနျလာဥနီ၊ အရောငျပါတဲ့အခြိုရညျ၊ ခရမျးခဉျြသီး စတာတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ မကွာသေးခငျက စားထားတဲ့ အစားအစာတှကေို ပွနျစဉျးစားကွညျ့လိုကျပါ။ အစားအစာတှကွေောငျ့ မဟုတျရငျတော့ ဆရာဝနျဆီ သှားလိုကျပါ။ အနီရောငျတှရေ့တာ သတိပေးတဲ့ လက်ခဏာပါ။ စအိုမှာ ပွဿာနာရှိလို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။အစာဟောငျးအိမျက သှေးကွောပေါကျခွငျး၊ အူမကွီးနဲ့ဆိုငျတဲ့ရောဂါ၊ ကငျဆာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ပုံသဏ်ဍာနျတှနေဲ့လညျး သငျ့ကနျြးမာရေးကို ခနျ့မှနျးကွညျ့လို့ရပါတယျ။
သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ အမြှငျဓာတျ အားနညျးနတောပါ။ ဂြုံနဲ့လုပျထားတဲ့ခေါကျဆှဲ၊ ငါးဥဆူးသီး၊ ပဲနီကလေးစတဲ့ အမြှငျဓာတျပါတဲ့ အစားအစာတှကေို ပိုစားပါ။
အမြှငျခြို့တဲ့နလေို့ပါ။ ဝမျးပိတျဆေးမြားကို ကွာရှညျသောကျသုံးခွငျးနဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုနညျးလို့ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အသီးအနှံ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို မြားမြားစားပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးဖို့ လုပျပါတယျ။
ဒီလိုပုံစံဆိုရငျတော့ ကောငျးပါတယျ။ လမျးလြှောကျပွီး ရမြေားမြားသောကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
အာဟာရမြှတအောငျစားပွီး စိတျဖိစီးစမေယျ့ အခွအေနတှေကေို ရှောငျပါ။
5. ဝမျးလြှောနခွေငျး ဆိုရုံမြှ
အူမကွီးမှာ အခွအေနဆေိုးနတေဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။ အမြှငျဓာတျနညျးတဲ့ ငှကျပြောသီး၊ ဘီစကှတျနဲ့ အာလူးတှစေားတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
6. အနညျးငယျ ဝမျးလြှောနခွေငျး
သငျစားတဲ့အစားအစာထဲမှာ အမြှငျဓာတျအလှနျမြားနလေို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျကုနျခနျးနလေို့ ရမြေားမြားသောကျပေးပါ။ အာလူးပွုတျနဲ့ ငှကျပြောသီးပွုတျကို စားပေးပါ။ OTC, Imodium နဲ့ Pepto-Bismol ဆေးတှေ သောကျလို့ရပါတယျ။2ရကျထကျ ပိုလာရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။
အစားမှားခွငျး၊ အူသိမျမှာ သဘာဝသကွားဓာတျကို မခဖြေကျြနိုငျခွငျး၊ ဘကျတီးရီးယားမြား ဝငျရောကျခွငျး လက်ခဏာတှပေါပဲ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျခနျးခွောကျနလေို့ ရမြေားမြားသောကျပါ။ OTC ဆေးတှလေညျး သောကျကွညျ့ပါ။2ရကျထကျပိုလာရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ဆှေးနှေးပါ။
သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘယျလိုပွောငျးလဲနပွေီလဲ။ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဖို့ လိုနပွေီလား။
အီးတုံးပုံစံ ၁၂ မျိုးက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး
21 ရာစုမှာတော့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာ အရေးပါမှန်း နောက်ဆုံးတော့ သိသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က လက္ခဏာတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မကြာခဏ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အီအီးတွေကို စိစစ်ကြည့်ဖူးပါသလား။ သင့်အီအီးတွေရဲ့ အရောင်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေက သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အရောင်ကတော့ အညိုရောင်ပါပဲ။ သင်စားအပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်တော့ အရောင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ရုတ်တရက် အရောင်ပြောင်းသွားတာက သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ရွှံ့ရောင်ဖြစ်နေရင် သည်းခြေရည်ချို့တဲ့တာကို ပြတာပါ။ သည်းခြေရည်ထုတ်ပေးတဲ့ အသည်းနဲ့ သည်းခြေအိတ်မှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ သည်းခြေပြွန်က ပိတ်နေခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါဖြစ်တဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့ သည်းခြေကျောက်ကြောင့်လည်း အဖြူရောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဖြူရောင်အချွဲတွေ ကပ်နေခြင်းက အူမကြီးရောင်ရမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလိုရိုဖီးလ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစိမ်းရောင်အသီးအနှံတွေ၊ အစိမ်းရောင်ပါတဲ့ သောက်စရာတွေနဲ့ သံဓာတ်အားဖြည့်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် အစားအစာတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အစာခြေဖျက်တာမြန်ပြီး သည်းခြေရည်နဲ့ Bilirubin ဆဲလ်တို့အတွက် အချိန်လုံလောက်စွာမရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်ကတော့ သည်းခြေပြွန်ပိတ်နေခြင်းနဲ့ အဆီဓာတ်စုပ်ယူမှု နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကရိယက ထုတ်ပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းချို့တဲ့တဲ့အခါလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းလည်း လန့်မသွားပါနဲ့ဦး။ မုန်လာဥဝါတွေ အစားများလို့ ဒါမှမဟုတ် အဝါရောင်ပါတဲ့ အရည်တွေ သောက်တာများလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Aspririn, ibuorofen နဲ့ သံဓာတ်ပါတဲ့ ဆေးတဲ့သောက်တာများရင် ဒါမှမဟုတ် အူသိမ်မှာ သွေးထွက်နေရင် အနက်ရောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ထပ်ပြီး တွေ့နေရသေးရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းသွားလိုက်ပါတော့။ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ နွယ်ချိုလိုမျိုး အနက်ရောင်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ စားရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အနီရောင်ကတော့ သင်စားတဲ့ အစားအစာနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ၊ အရောင်ပါတဲ့အချိုရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီး စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မကြာသေးခင်က စားထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ အစားအစာတွေကြောင့် မဟုတ်ရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ သွားလိုက်ပါ။ အနီရောင်တွေ့ရတာ သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာပါ။ စအိုမှာ ပြဿာနာရှိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာဟောင်းအိမ်က သွေးကြောပေါက်ခြင်း၊ အူမကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါ၊ ကင်ဆာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့လည်း သင့်ကျန်းမာရေးကို ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမျှင်ဓာတ် အားနည်းနေတာပါ။ ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲ၊ ငါးဥဆူးသီး၊ ပဲနီကလေးစတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုစားပါ။
အမျှင်ချို့တဲ့နေလို့ပါ။ ဝမ်းပိတ်ဆေးများကို ကြာရှည်သောက်သုံးခြင်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို များများစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့ လုပ်ပါတယ်။
ဒီလိုပုံစံဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ပြီး ရေများများသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အာဟာရမျှတအောင်စားပြီး စိတ်ဖိစီးစေမယ့် အခြေအနေတွေကို ရှောင်ပါ။
5. ဝမ်းလျှောနေခြင်း ဆိုရုံမျှ
အူမကြီးမှာ အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ အမျှင်ဓာတ်နည်းတဲ့ ငှက်ပျောသီး၊ ဘီစကွတ်နဲ့ အာလူးတွေစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
6. အနည်းငယ် ဝမ်းလျှောနေခြင်း
သင်စားတဲ့အစားအစာထဲမှာ အမျှင်ဓာတ်အလွန်များနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ကုန်ခန်းနေလို့ ရေများများသောက်ပေးပါ။ အာလူးပြုတ်နဲ့ ငှက်ပျောသီးပြုတ်ကို စားပေးပါ။ OTC, Imodium နဲ့ Pepto-Bismol ဆေးတွေ သောက်လို့ရပါတယ်။2ရက်ထက် ပိုလာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
အစားမှားခြင်း၊ အူသိမ်မှာ သဘာဝသကြားဓာတ်ကို မချေဖျက်နိုင်ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားများ ဝင်ရောက်ခြင်း လက္ခဏာတွေပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နေလို့ ရေများများသောက်ပါ။ OTC ဆေးတွေလည်း သောက်ကြည့်ပါ။2ရက်ထက်ပိုလာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီလဲ။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုနေပြီလား။